Hevitra DIY momba ny karatra krismasy vita tanana vita tanana tsara indrindra | Famoronana an-tserasera
Isaky ny Krismasy raisintsika karatra paositra miarahaba ny krismasy. Marina izany fomban-drazana very na mivoatra amin'ny fahatongavan'ilay vaovao teknolojia.
Tianay ny hanome aingam-panahy anao amin'ny hevitra marobe ka entanina ianao hamorona ny arahaba anao manokana Krismasy. Kely sary an-tsaina, fotoana ary nofinofy mety ho ianao no voalohany indrindra amin'ny fianakaviana na ny namana.
1 Karatra paositra vita tanana
2 Ampiasao ny vatanao
3 Karatra paositra misy bokotra
4 Karatra paositra misy baoritra
5 Hevitra misimisy kokoa amin'ny cardstock
6 Karatra paositera misy peta-kofehy
7 Fantatrao ve ny kasety Washi?
Karatra paositra vita tanana
Mandehana miasa ary avelao hanidina ny fahaiza-mamorona anao fanaovana karatra krismasy vita tanana. Izy io dia hetsika tsara atao amin'ireo ankizy kely ao an-trano. Tsara drafitra Alahady! Mila fitaomana aingam-panahy sy fitaovana kely azonao ampiasaina ao an-trano fotsiny ianao. Izy ireo no asa-tanana malaza antsoina hoe DIY (ataovy ny tenanao), ny dikanteny dia "ataovy izany".
Ampiasao ny vatanao
Ny ohatra voalohany tianay haseho anao dia tsotra dia tsotra, tsy mila miloko, marika na fitaovana hafa loko fotsiny ianao ny vatanao ihany. Marina ny vakinao, ny vatanao ihany. Handeha isika manaova sary masina Krismasy amin'ny dian-tananay, amin'ny tanantsika na ny tongotsika.
Andao hijery ny sasany ohatra:
Araka ny hitantsika amin'ny sary, ireto serfa izy ireo vita amin'ny dian-tànana mandoko ny sasany. Avy eo, rehefa maina, dia hotarihintsika ny masontsika, ny sofina ary ny tandroka. Hiaraka amin'ny sary miaraka amina lahatsoratra miarahaba sy ... vonona!
Con loko misy loko isan-karazany ary ny dian-tongotra dia hataonay izay ho jiro krismasy. Rehefa maina isika dia hiaraka amin'izy ireo amin'ny tsipika tsy ara-dalàna hanome ny vokatry ny tariby.
Safidy iray hafa ny fampiasana ny manontolo Rofia amin'ny tanany ary avelao hisidina ny famoronana antsika. Toy ny ohatra nalaina an-tsehatra amin'ny snowman dia azontsika atao ny manao ny olon-kendry, Dadabe Noely na olona hafa ao amin'ny fihinanam-bilona.
Karatra paositra misy bokotra
Safidy iray fanodinana fitaovana sy ny zavatra ananantsika ao an-trano hanaovana ny karatra paosintsika. Amin'ity tranga ity, manoro hevitra anao izahay mba hamoaka ny boaty fanjairana ary hampiasa ireo rehetra ireo botones tsy misy mpiara-miasa izay tazominay tsy misy dikany.
Mampiasa bokotra? Misy fomba maro hampidirana azy ireo amin'ny volavolainay. Avelao izahay hanoro anao ny sasany ohatra, manome toky anao hanao ny famoronana anao izy ireo.
Araka ny hitanao dia afaka manatanteraka ny toetra mitovy amin'ny fomba maro samihafa, ary samy manana ny hatsarany ny tsirairay amin'izy ireo. Avelao hanidina ny eritreritrao ary ampiasao amin'ny fomba hendry ireo fitaovana anananao. IRETO Snowman vita amin'ny botones dia tena tsotra tanterahina ary tena valiny tokoa tany am-boalohany.
Azontsika atao koa ny mampiasa ny bokotra toy ny litera. Amin'ity tranga ity, "ho ho ho" dia voasoratra, ny onomatopoeia izay nataon'i Santa Claus rehefa mihomehy izy. Ny litera "o" dia nosoloina bokotra iray. Hevitra tena tsotra nefa tsara be ny vokany.
Ny haingo Krismasy, ny baolina izay ahantonantsika amin'ny hazo dia soloina bokotra miloko isan-karazany. Haingana, mora ary maro loko!
Karatra paositra misy baoritra
ny karda miloko mety ho mpiara-miasa akaiky indrindra hamorona zavatra bebe kokoa matihanina karatra paositry ny Noelinay. antsika mitsitsia fotoana betsaka fandokoana. Tandremo fa misy hevitra hampijanonana lamasinina.
Con karatra telo samy hafa loko, iray isaky ny faritra amin'ny vatana afaka mahazo fahagagana tena izy ianao. Ity Dadabe Noely mahafinaritra ity dia namboarina tamin'ny:
Baoritra mena: ho an'ny satroka.
Loko hena baoritra: Ho an'ny tarehy.
Baoritra fotsy: Ho an'ny faran'ny satroka sy volombava.
Ianao ihany no mila izany vaky daholo amin'ny habe izay heverinao fa mety dia fika iray ihany ny rovitra ny sisiny. Apetaho izany ary avy eo hantsaka orona sy maso. Mora be!
Araka ny hitantsika amin'ny sary dia afaka mahatratra a Snowman amin'ny fijerin'ny vorona amin'ny fomba tena tsotra. Raha mandinika ny fomba nanaovana an'ity carte postale ity isika dia mahatsapa fa tena mora ny mahita vokatra tsara. dia tsy maintsy manapaha sfera telo manana habe samihafa. Hampiasa baoritra fotsy izahay. Ireo boribory ireo dia ho vatan'ny snowman. Hisintona sy hanapaka ny orona, ny fitaovam-piadiana ary ny fehy. Ny ambiny hotsoahantsika misy marika mainty: maso sy vava.
Raha mitady a haavo avo indrindra amin'ny fanodinana, asehonay anao ity andiana karatra paositra ity izay mila fotoana sy dian-tongotra bebe kokoa. Azonao atao ny manamboatra carte postales maromaro an'ny maodely tsy mitovy. Amin'izany fomba izany no hahitan'ny namanao, ohatra, fa samy manana modely hafa ny tsirairay amin'izy ireo. Fomba iray hanehoana fa zavatra be io manokana kokoa ary ho hitany bebe kokoa izany zava-poana.
Misolo tena ireto karatra paositra ireto endri-tsoratra samy hafa izay mifanaraka amintsika Daty noely:
Santa Claus, toetra amerikanina tonga teto amin'ny firenentsika. Noraisinay io fomba amam-panao io nandritra ny taona maro izao.
Reno, dia ilay biby misintona ny fitaterana an'i Santa.
vorondrano, izay manondro ny hatsiaky ny ririnina.
Snowman. Izy io koa dia manondro ny hatsiaka sy ny lanezy.
Hevitra misimisy kokoa amin'ny cardstock
Misy hevitra marobe, arosonay ny sasany amin'izy ireo:
ny Lehilahy hendry.
Sehatra nahaterahana tao Betlehema.
rameva, ireo biby izay miaraka amin'ity lehilahy hendry telo manaraka ity kintana fitifirana amin'ity tranga ity.
hazo noely. Azontsika haingoina amin'ny singa maro toy ny baolina, jiro ary ny kintana.
Dadatoan'i Nadal na cagatió, fomban-drazana Katalana izany.
Anisan'ireo safidy maro hafa.
Karatra paositera misy peta-kofehy
Tolo-kevitra tena izy ny ny peta-kofehy ny karatra paosinay. Voalohany indrindra, tsy maintsy teboka Ny baoritra. Miaraka amin'ny teboka dia hanaisotra ny endrika tiantsika amboradara. Hanao izany peta-kofehy amin'ny baoritra izany isika, noho izany, tokony hitandrina tsara isika mba tsy hanapaka ny fanohanana.
Ny dingana voalohany raisina dia ny volavolainay. Azontsika atao amin'ny tanana izany na jerena amin'ny Internet ary atao pirinty. Manoro hevitra izahay fa a sary tsotraamin'ny andalana vitsivitsy ary ireo no nisaraka tamin'izy ireo. Ny antony dia tena tsotra, satria raha mifanakaiky ny lavaka dia afaka triatra izy ireo rehefa mandavaka azy ireo.
Apetaho ny sary misy kasety amin'ny ampahany aloha ny karatra, izay tianao hametrahana ny sary. Hole manamarika ny endrik'ilay endrika. Aorian'izay, esory ny ravina ary afaka manomboka manao amboradara ianao. ny fitaka Ny fanaovana ny lavaka nefa tsy manimba ny baoritra dia a fanampiana malefaka ambany. Azonao atao ny mampiasa bosoa, polystyrene, hamafa na fitaovana hafa miaraka amin'ireo toetra ireo. Tazomy ny elanelana farany ambany eo anelanelany 3 sy 5 milimetatra eo anelanelan'ny lavaka hisorohana ny fahatapahana.
Fantatrao ve ny kasety Washi?
Afaka mampiasa karazana fitaovana maro isika, ary taona vitsy lasa izay ny kasety washi. Izy ireo dia momba kasety adhesive miaraka amin'ny loko haingon-trano sy miloko.
Afaka manao carte postales mahafinaritra be isika amin'ny baoritra, marika sy kasety washi. Azontsika atao ny mitondra azy ireo mankany vidiny ambany dia ambany, indrindra raha mividy isika Packs amin'ny Internet. Avelanay rohy ianao eto raha sahy mividy an'ity fitaovana ity ianao.
Manomboka amin'ny a hazo noely. Araka ny hitanao dia mora be ny manao azy, mila loko maromaro ihany isika. Hanapaka volo avy amin'ny lehibe kokoa ka hatramin'ny halavany kokoa isika ary hametahana azy ireo.
Araka ny hitantsika amin'ny sary etsy ambony, isika dia afaka manamboatra frame amin'ny kasety washi ary manoratra izay tiantsika rehetra eo afovoany. Afaka mitady hevitra momba ny soratra hahazoana hevitra amin'ny fanaovana litera mahafinaritra. Tsy misy farany ny safidy!
Mandrosoa ary ataovy ny karatra paosinao ary ambonin'izany rehetra ...TRATRY NY KRISMASY!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » DIY Krismasy karatra paositra